Akhriso:-Wararkii U Dambeeyay Ee Caabuqa Coronavirus Ee Caalamka Oo Dhan. AwdalMedia Awdalmedia Akhriso:-Wararkii U Dambeeyay Ee Caabuqa Coronavirus Ee Caalamka Oo Dhan.
Maraykanka: WARAR DHEERAAD AH OO KU SAABSAN CORONA
Dhaqaatiirta iyo hawlwadeenada caafimaadka ayaa laga soo sheegayaa inay ka digayeen xaalad adag oo dhinaca qalabka caafimaadka ah oo gabaabsi sii noqonaya waxana ay ku tilmaameen xaalada mid Sumcad xumo ku ah Maratkanka
Maayarada 90% magaalooyinka Maraykana ayaa laga soo wariyay inay ka digeen shaqaalaha iyo hawl wadeenada caafimaadku inay ka sii faro-madhnaanayaan qalabka caafimaadka iyo kii badbaada coronavirus todobaadyada fooda nagu soo haya.
Maraykanka waxa la diiwaan galiyay in ka badan 100,000 oo kiis oo coronavirus ah, taa ka dhigaysa dalkan dalka ugu kiisaska badan caalamka aoo dhan.
Madaxwayne Trump waxa uu balan qaaday in 100 maalmood gudahood ay ku soo saari doonaan 100kun oo xabo oo qalabka neefsashada caawiya ah, dunidana ay ka caawin doonaan inay badh u diraan
UN-ta OO SHAACISAY TIRADA SHAQAALAHEEDA QAADAY CORONAVIRUS
Jimciyada Quruumaha Ka Dhaxaysa waxa ay sheegtay in 86 ka mid ah Hawlwadeenadeeda ku sugan daafaha caalamka ay qaadeen caabuqa COVID-19.
Afhayeen u hadlay UN-ta oo lagu magacaabo Stephane Dujarric ayaa yidhi “Badi kiisaska caabuqan ee aan diiwaangalinay waxa ay u badan yihiin shaqaalahayaguu ka hawlgalay Yurub, waxase jira shaqaale ku sugnaa Africa, Asia, iyo Bariga Dhexe iyo Maraykankaba oo laga helay coronavirus haba yaraadaane.
IRAN: TIRADA KIISASKA CUSUB EE CORONA OO KORODHAY
Tirada dadka u dhintay coronavirus ee Iran ayaa korodhay waxana ay hawlwadeenada caafimaadku sheegeen inay gaadhay 2,517 oo qof halka ay 139 kiis ka yihiin kuwo cusub oo la diiwaan galiyay 24kii saac ee u dambeeyay.
Kianoush Jahanpour, oo ah Afhayeen u hadlay Wasaarada Caafimaadka ayaa yidhi 3,076 oo qof ayaa la xaqiijiyay in ay qaadeen caabuqan, taas oo tirade guud ee dadka covid-19 haleelay ka dhigaysa 35,408 oo qof. Afhayeenka ayaa intan ku daray in 3,200 oo bukaan ay xaaladoodu halis tahay.
Si kastaba ha ahaatee waxa jira Iran 546 oo qof oo ka bogsaday caabuqan 24kii saac ee u dambeeyay, taas oo tirade guud ee bukaanada ka kacay coronavirus ee dalkaas ka dhigaysa 11,679, sida laga soo xigtay Afhayeen Jahanpour.
SPAIN: 832 QOF OO KU DHINTAY 24kii SAAC EE LA SOO DHAAFAY
Dawlada Spain wasaarada u qaabilsan Caafimaadka waxa ay ku dhawaaqday in ay 24kii saac u dambeeyay dalkaasi ku geeriyoodeen 832 qof, taasina ay tahay tiradii ugu badnayd ee dalkaasi ku dhimatay maalin kaliya.
Guud ahaan tirade dhimashada ee Spain oo ku u kacday ayaa la wariyay inay isaga gudubtay inta u 5,690 oo ay maanta gaadhay halka ay markii hore ka ahayd 4,858 oo qof.
Dadka qaaday caabuqan covid-19 ee dalka Spain ayaa iyaduna koray gaadhayna 72,248 oo kiis, halka ay shalay oo Jimce ah ka ahayd 64,059 oo kiis.
SOUTH KOREA OO QALABKA CAAFIMAADKA COVID-19 U SAMAYNAYSA MARAYKANKA
Sedex shirkadood oo laga leeyahay dalka South Korea ayaa ku guulaytay tartan loo galay soo soo saarida qalabka lagu baadho coronavirus, sida ay sheegtay Hayada Maraykanka u qaabilsan Dhawrista Tayada Cunada iyo Daawooyinka.
Sidoo kale Wasiirka Arimaha Dibada ee South Korea ayaa sheegay in ay shirkadahaasi guulayteen, xeerkarka gurmadka dagdaga ah ee maraykanka ka dhaqan galayna ay u ogolaanayaan inay Suuqyada Maraykanka.
Dhawaan ayay ahayd markii Madaxwayne Donald Trump uu ka codsaday dhigiisa South Korea Moon Jae-in in uu ka caawiyo helitaanka daawooyinka iyo qalabka baadhista corona, tan badalkeedana uu ka taageeri doono Shirkadaha Koonfurta Kuuriya in ay gudaha USA ka shaweeyaan.
Sidoo kale Shirkada Roche ee laga leeyahay Swiss-ka ayaa ku guulaysay inay qalabkan ka iibiyaan Maraykana.
UK: DHIMASHADA IYO DADKA LAGA HELAY CORONA OO KORODHAY
Britain waxa ay sheegtay in ay korodhay dhimashada dadka ku tagay coronacirus oo ay gaadhay 1,019 qof, taas oo la micno ah in 24kii saac ee u dambeeyay ay dhinteen 260 qof.
Guud ahaan dadka uu haleelay caabuqan eek u dhaqan UK ayaa lagu sheegay 17,089 oo qof maanta oo sabti ah, halka maalintii shalay ee Jimcaha ahayd ay ka ahaayeen 14,543 oo qof.
TRUMP OO SHIRKADAHA BAABUURTA KU AMRAY INAY QALABKA NEEFSASHADA SOO SAARAAB
TUUNIISIYA: SHAQAALE WARASHAD ISKU KARANTIILAY
Shaqaalaha warshad ku taal waddanka Tuunis ayaa maalintiiba waxa ay soo saaraan 50,000 oo walxaha afka lagu duubta ah iyo qalab kale oo caafimaad kaddib markii ay doorteen inay goobtaas isku karantiilaan.
150 shaqaale ah oo u badan haween ayaa waxa ay muddo bil ah isku karantiileen warshad.
Waxaa dhiirigaliyay wadaniyadooda xilli dalka uu la tacaalayo cudurka coronavirus, ayuu yidhi Xamza Caluuni, maareyaha shaqaalahaas.
Khalwa Ribxi oo ka tirsan shaqaalaha ayaa sheegtay in ay si ugu xiistay qoyskeeda, hasayeeshee dareenka wanaagsan ee saaxiibadeed shaqada ay ka heshay waxoogaa ay ku nasato.
“Ninkeyga iyo gabadhayda 16-jirka ah ayaa waxa ay igu taageeraan oo ay igu dhiirigaliyeen inaan sidan sameeyo,” ayey Ms Ribxi oo madax ka ah wax soo saarka
Magaaladii Wuhan Ee Uu ka Bilowday Corona-virus Oo Xayiraada Laga Qaaday.